Xilkasnimadii iyo xarraga doodkii Gaashaanle sare Ibraahin. WQ- Maxamed sidiiq Dhamme.
Home QORMOOYIN Xilkasnimadii iyo xarraga doodkii Gaashaanle sare Ibraahin. WQ- Maxamed sidiiq Dhamme.
Toddobaadkii hore waxaanu dood kaga qayb gallay Universal Tv, dooddaas oo lagaga hadlaayay tacadiyada Booliska iyo xuquuqul iinsaanka Somaliland. waxa nagala soo qaybgalay Gashaanle sare Ibraahim oo ah hoggaanka hawl-galelinta booliska Somaliland, qof ahaan waxa aan qirayaa in uu yahay gashaanluhu nin isku kalsoon oo faham sharci iyo mid bulsho leh, waxa uu si dhaba uga garaabay qabyada jirta, waxa aan laga masuugi karin in Ibraahim yahay nin degen oo leh waaya aragnino ciidan.
Waan ku amaanayaa in uu nagala qayb galay dood mihiim ahayd oo lagu rogrogaayay tacadiyada ay sameeyaan bilaysku, dhawaanahan ma dhicin in xubin ciidanka ka tirsan la doodo asxaabta, garyaqaanada iyo muwaadiniinta xaqa u leh in la qanciyo. waa ku dhiirisho wanaagsan oo keenaysa in laysi saxo laysna qanciyo, la wadaago talo, toosin iyo tusmo. waxaanay muujinaysaa ilbaxnimo weyn dad ahaan iyo dal ahaanba.
Waxaan aaminsanahay in Bilayskeenu u baahanyahay tababaro dheeraada,tayayn joogta ah,mushar kordhin,caafimaad, waxabarasho,hoy iyo in u adkooda iyo ooriyahooda noloshooda la dammaanad qaado. Bilayskeenana si hab-dhaqankooda iyo aragtida bulshadu ka aaminsantanay u hagaagto waa in hogganada iyo hoggaaminta loo dhiibaa askarta uu tusaalaha u yahay Gaashanle sare Ibaarin Cabdi Xaaji.
Previous articleFaahfaahinta qaraxii xalay ee Muqdisho iyo Turkiga oo cambaareeyay
Next articleHargeysa oo laga dhisayo qasriga Suldaanka Guud ee Beelaha Somaliland